Askar ka tirsan Ciidamada Midowga Afrika oo dad shacab ah ku dilay Shabeelada Hoose oo lagu xukumay dil toogasho ah - Radio Maanta FM 95.5MHZ - Amplifying voices from Somalia’s vulnerable communities
Askar ka tirsan Ciidamada Midowga Afrika oo dad shacab ah ku dilay Shabeelada Hoose oo lagu xukumay dil toogasho ah
Kiis dacwadeed loo haystay Shan askeri oo AMISOM ka tirsan kuwaas oo lagu helay “in ay dad rayid ah ku dileen” deegaanka Golwayn ee Shabeellaha Hoose ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Maxkamadeynta ayaa bilaabatay 5-tii bishan Maxkamadda AMISOM ee Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Bishii August ee sannadkan, waxaa lagu dilay dad shacab ah oo gaarayay toddobo qof oo, waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyay miino, ka dibna lagu qarxiyay.
Afhayeenka Beeralleyda Gobolka Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, oo ku sugnaa maxkamadda, kaas oo la hadlay BBC Soomaali wuxuu sheegay in “Maxkamadda maantaa la soo gebagebeeyay.”
“Waxaa Ugandha ka yimid (xubno ka tirsan) maxkamadda ciidamada. Jimcahii ayey billaabatay.
Laba maalmood waxaa hadlay dadkii ku caddeynayay dembiga. Anaga waa nalagu casuumay, waana dhageysaneynay”, ayuu yiri Xuseen.